Qatar oo guryo u dhisaysa ciidamada Mareykanka ee dalkeeda – Radio Daljir
Janaayo 30, 2018 8:15 b 0
Wasiirka gaashaandhiga Qatar Khaalin Bin Muhamed Al-Attiyah oo booqasho ku jooga Washington ayaa sheegay inay balaarinayaan saldhigga ciidamada cirka Mareykanka ee jooga dalka Qatar, isagoona sheegay in guryo dheeraad ah lagu dari doono.
Saldhiga oo ay hadda ku yaaliin toban kun oo guri , ahna saldhigga ugu wayn ee Mareykanka uu ku leeyahay dunida ayaa waxaa uu sheegay in lagu kordhin doono laba boqol.
Al-Atiyah ayaa ka sheegay xaflad loogu qabtay Washington ayaa sheegay inay uga gol leeyihiin arrintan si’ay u noqoto goob ay ku raaxaysan karaan ciidamada Mareykanka iyo qoysaskooda ee jooga Qatar.
“Waxaa ay si dhaqso ah u noqon doontaa goob qoysaska ku haboon gaar ahaana saaxiibadeena Mareykanka ee halkaasi jooga, waxaana doonaynaa in qoysas badan ay ku noolaan ayna u dareemaan raaxo” ayuu yiri wasiirka gaashaandhiga ee Qatar.
Saldhiga Al-Udeyd ee Mareykanka ee Qatar ayaa ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan ee Mareykanka uu ku leeyahay Bariga Dhexe, isagoona halkaasi ka qaada howlgalada Bariga dhexe uu ka wado Mareykanka.
Sanadkii 1991kii ayaa la furay saldhigan kadib dagaalkii gacanka, heshiis dhexmaray Mareykanka iyo Qatar oo ku dhisan dhanka difaaca.
Militariga Mareykanka ayaa saldhigan loo daad gureeyey sanadkii 2003dii, waxaana saldhigan Al-Udayd uu hoy u yahay ciidamo kasocda Ingiriiska iyo dalalka la xulafada ah Mareykanka.
“Qatar waxaa ay dhacdaa goob istiraatiiji ah Afgaanistaan, Ciraaq iyo Suuriya ayaa ay u dhowdahay” ayuu yiri wasiirka gaashaandhiga Mareykanka.
Bishii June dowladaha Masar, Baxrayn, Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta ayaa u jaray xiriirka diblumaasiyadeed Qatar, waxaana ay kusoo rogeen cunaqabatayn kadib markii lagu eedeeyey inay maalgaliso argagaxisada iyo xagjirka, inkastoo eedaymahaasi ay iska fogaysay Qatar.
“Waxa todobadii bilood ee lasoo dhaafay ka dhacayay Khaliijkama’ ahan wax u wanaagsan tamar ahaan iyo xag nabad geliyo, waxaana arrintan kaliya ka faa’iidaya argagaxisada” ayuu yiri wasiirka oo dhanka kalle sheegay cidda kaliya khilaafka Khaliijka wax ka qaban kara uu yahay madaxwaynaha Mareykanka Trump uu usoo jeediyay dowladda uu hogaamiye inay door ka ciyaarto xalinta khilaafka Khaliijka.
Ufayn, gobolka Bari oo markii u horaysay laga bilaabay canshuurta (dhegayso)